उपचार गर्ने पैसा नहुँदा मृत्युको मुखमा जमुना! – PathivaraOnline
Home > समाज > उपचार गर्ने पैसा नहुँदा मृत्युको मुखमा जमुना!
उपचार गर्ने पैसा नहुँदा मृत्युको मुखमा जमुना!
admin February 14, 2019 समाज 0
ऋषिराम खड्का काठमाण्डौं, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको बेड नम्बर ३०३ मा मृत्युसँग लडिरहेकी जमुना गहतराज यतिबेला जीवन मरनको दोसाँधमा छिन । सानीभेरी गाउँपालिका ३ गरायला पश्चिम रुकुमकी २५ वर्षिया जमुना माईति पक्षबाट त उहिले नै मरिसकिन जब उनले दलित सँग बिहे गरिन । माईति ब्राह्मण (देवकोटा) थरकी जमुनाले गाउँकै दलित दिपेन्द्र गहतराजसँग करिब ८ वर्ष पहिले प्रेम बिहे गरेको सिधान्युज सँग बताइन ।
जमुनाका श्रीमान दिपेन्द्र नेपाल प्रहरीका जवान हुन । दिनभरी ड्युटी गर्छन हरेक साँझ श्रीमतीको मलिन मुहार हेर्न अस्पताल पुग्छन र विहान भगवान भरोसा आफ्नी अर्धांगिनीलाई अस्पतालको बेडमा छोडेर बर्दी कस्दै ड्युटी फर्किन्छन ।
काठमाण्डौंको कोटेश्वरमा ६ वर्षको छोरासँग सानो कोठा भाडामा लिएर बसेकी जमुनालाई कलिलै उमेरमा क्यान्सर होला भन्ने कल्पना पनि थिएन । कथन नै छ ‘दशा बाजा बजाएर आउँदैन’ त्यस्तै भयो उनको जीवनमा छोरालाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिउँला हुर्काउँला बढाउँला ठुलो मान्छे बनाउला भनेकी जमुनाको नियती अर्कै बनेर आयो । १ कक्षामा पढ्ने ६ वर्षको छोराले अस्पतालमा आमाको कुरुवा गर्छ । उसैले रेखदेख गर्छ ।
एएमएल ब्लडक्यासरले थिलिएकी जमुनाका अबोध छोरा आमा कहिले निको होलिन र आफुँलाई मिठो खुवाएर ड्रेस लगायर स्कुल पठाउलिन भन्ने सोच्छन । दिपेन्द्रको नेपाल प्रहरीको जागिरीले जमुनालाई बचाउँन मुस्किल छ । भएको जायजेथा सबै बेचेर १५ लाख सकिसक्यो । जमुनाको क्यासर ७५ प्रतिसत निको भईसकेको र बाँकी २५ प्रतिसत पैसा भए निको हुने उनको उपचारमा खटीएका डाक्टरले बताएको दिपेन्द्रले चेतना अनलाइनसँग भने । तर दिपेन्द्रसँग सुको छैन ।
बुढी सासुआमा आश्मादेवी गहतराज अस्पतालको चिसो भुईमा बिरामी बुहारी कुर्दै रातकाट्छिन । कक्षा १ मा पढ्ने छोरा पनि ३ महिना देखि अस्पतालमा आमालाई कुर्दै बसेको छ । गरिब हुनु नै अभिसाप जस्तै बनेको छ जमुनालाई ।
अन्तरजातिय विहे गरेपछि समाजले छि:छि दुरदुर गर्यो । समाज भन्दा टाढा बस्नु नै जमुनाले उपयुक्त ठानिन र जीवनमा केहि गर्ने सोचले श्रीमानसँगै राजधानी आईन । अन्तरजातीय बिहे गरेपछि उनलाई न समाजले राम्रो आँखाले हेर्यो न माइतिपक्षले तर पनि जमुनाले हार खाईनन बरु समाज त्यागिन तर सम्बन्ध त्यागिनन ।
भोलि कसैले पनि देखेको छैन । समाजका ठुला-ठुला समस्याको समाधान देश विदेशबाट नेपालीहरु मिलेर गरेका उदाहरणहरु प्रसस्त छन । पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने कृष्ण ओली हरिकाजी, मेघा घिमिरे, बुद्धिमान कुवर ज्वलन्त उदाहरण हुन । तपाइँहरु नि जो जहाँ हुनुहुन्छ सेवा नै धर्म हो । सक्नु हुन्छ भने एउटा वर्थ दे, एउटा एनिभर्सरी, एकदिनको गेट टुगेदर वा एक दिनको नास्ता नखाएर जमुनालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने जमुनाका श्रीमान दिपेन्द्र गहतराजको फोन नम्बर ९८६१९७९८२७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । यदि जमुनालाई आर्थिक सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने श्रीमान दिपेन्द्रको बैंक खाता नम्बर 0108010020057 GLOBLE BANK रहेको छ ।
भ्यालेनटाइन मनाउदै गर्दा बखतलाई आयो प्रेमिकाको फोन, प्रतिभाको रुवाबासी (भिडियो)
जम्मू–कश्मीरमा भारतलाइ ठूलो सैन्य क्षति : ३९ जना सेनालाइ बमले उडाइदियो ( पूरा हेरि शेयर गरौ )
“मलाई अक्सिजन चाहियो, म बाँच्न चाहन्छु” भन्दाभन्दै गयो यी युवकाे ज्यान
दुलहाले बेहुलीकै घरमा विवाहित महिलालाई गरे कर णी, बहिनीले नै किन मिलाइदिइन् त्यस्तो ब्यवस्था !